ပထမဦးဆုံး ===> setting ကိုဝင်လိုက်ပါ ..GeneralAccountsLabelsFiltersForwarding and POP/IMAPChatWeb ClipsLabsThemes တွေ အထဲက Accounts ကိုရွေးလိုက်ပါ ..ညာဘက်ဘေးက edit info ကိုထပ်ဝင်လိုက် နှိပ်လိုက်ပါ ..ယခုလက်ရှိ သုံးနေသည့် နာမည်အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ ကွက်လပ်လေးမှာ ကိုအခုလိုချင်တဲ့ နာမည်ကို ထည့်လိုက်ပါ မြန်မာလိုပြောင်းလဲ ရပါတယ် .. Save Change ကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ . ကဲ နာမည်ပြောင်းတာ ပြီးသွားပါပြီ
ကဲစကားတွေလဲ သိပ်မပြောတော့ပါဘူး .. ဒီနေ့မနက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က သူမိနေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းပြောဖြစ်သွားတယ် .. ဗိုင်းရပ်စ်နာမည်က I love you. တဲ့ သိကြမှာပါ .. ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ့ကောင်ဖြစ်တာက တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ ငြိမ်နေလိုက်တာ . အခုနောက်တစ်ခါ ဖြစ်တဲ့သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. အောက်ကဖိုင်လေးကို download လုပ်ပါ .. password က iloveyou ပါ .. ပြီးရင် run လိုက်ပါ .. computer restart ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ...ကဲဒေါင်းရမယ့်ဖိုင်က ဒီမှာ ပါ ...ကဲ အဲ့ဒီ့မှာ မရရင် ဒီမှာ
Flash Drive ကို Fat32 ကနေ NTFS system ပြောင်းပြီး Format ချကြည့်ရအောင်
Window တင်တတ်တဲ့သူတိုင်း Fat32 မှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြမှာပါ .. ကျွန်တော် နေမကောင်းဘူး ဒါပေမယ့် ဒီပို့စ်လေးကို စာနည်းနည်းပဲရေးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးလုပ်လိုက်ပါ .. Flash Drive ထဲက ဗိုင်းရစ်ကိုသတ်တဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူအနည်းငယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် အကြံပြုလိုက်ပါတယ် .. Flash Drive တိုင်းဟာ Fat (or) Fat32 system ပဲ သူပေးထားပါတယ် အဲ့ဒါကို ကိုက ပြန်ပြောင်းရမှာပါ ...